ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट छुट्कारा, मात्र यी ५ सरल व्यायामबाट – PathivaraOnline
Home > स्वास्थ्य > ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट छुट्कारा, मात्र यी ५ सरल व्यायामबाट
admin December 30, 2018 December 30, 2018 स्वास्थ्य	0
एजेन्सी – खुट्टा शरीरको महत्वपूर्ण भाग हो । विभिन्न शारिरीक कसरतहरु गर्दा खुट्टाकै आधार लिनुुपर्ने हुन्छ । त्यसैले खुट्टाको हेरविचार गर्न निकै नै आवश्यक छ । यसले खुट्टा र ढाड दुख्ने समस्याबाट चाडैं छुट्कारा दिलाउँछ ।
के गर्भवती महिलाले कफी पिउँनु जोखिमपूर्ण छ? के के असर गर्छ? हेर्नुस्
यस्तो अचम्मकाे खबरः १२ बर्षिया बालिकाले आमा बनेपछि…